Football Khabar » सुपर कप हारेपछि भाल्भर्डेको जागिर धरापमा : बोर्डको बैठक बस्दै !
सुपर कप हारेपछि भाल्भर्डेको जागिर धरापमा : बोर्डको बैठक बस्दै !
जारी सिजनको स्पेनिस सुपर कप हारेपछि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको जागिर धरापमा परेको छ । गत राति बार्सिलोना एथ्लेटिको मड्रिडसँग ३–२ ले पराजित हुँदै सेमिफाइनलबाटै आउट भएको हो । सिजनको पहिलो उपाधि जित्ने बार्सिलोनाको सपना एथ्लेटिकोले खरानी बनाइदियो ।
सिजनको पहिलो उपाधि हातबाट गुमेपछि बार्सिलोनाले क्लबका प्रशिक्षक भाल्भर्डेको विषय र हारको विषयमा छलफल गर्न बैठक गर्दैछ । बार्सिलोना निकट पत्रिका ‘मुन्डो डेािर्टभो’को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारअनुसार बोर्डको बैठक सोमबार अपराह्न बस्दैछ ।
बार्सिलोनाले आइतबार राति ला लिगामा ग्रानाडासँग आफ्नो घरमा लिगको २०औं खेल खेल्दैछ । सो खेल भएपछि अर्को दिन बार्सिलोनाको बोर्ड बैठक बस्ने तय भएको हो ।
यदि सो खेल पनि हारे वा बराबरीमा रोकिए भाल्भर्डेको बिदाइ करिब–करिब पक्का देखिन्छ । ग्रानाडा त्यही टिम हो, जसले बार्सिलोनलाई पहिलो खेलमा २–० को नमिठो हार चखाएको थियो ।
सो बैठकले भाल्भर्डेलाई पदमुक्त गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ । भाल्भर्डेले अहिले बार्सिलोनामा तेस्रो सिजन बिताइरहेका छन् । उनी ३ वर्षअघि एथ्लेटिक बिल्बाओबाट बार्सिलोना पुगेका थिए ।
प्रकाशित मिति २५ पुष २०७६, शुक्रबार १३:३५